Home/Products/cost of small grinding mills in zimbabwe
One Day International Zimbabwe v Pakistan scoreboard
Oct 1 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the first One Day International between Zimbabwe and Pakistan on Thursday in Harare, Zimbabwe Paki.
Aug 7 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the third and final One Day International between Zimbabwe and New Zealand on Friday in Harare, Zi.
VIDEO: Zimbabwe applies indigenisation laws
Legislation requires all companies in Zimbabwe to be controlled by no less than 51% of indigenous people
Oct 5 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the third and final One Day International between Zimbabwe and Pakistan on Monday in Harare, Zimba.
Zimbabwe to get first IMF loan in nearly two decades this year
HARARE, March 16 (Reuters) - Zimbabwe expects a loan from the International Monetary Fund in the third quarter of this year, the first since 1999, the centra.
2 Italians killed in Zimbabwe in unclear circumstances
MILAN (AP) — Italy's Foreign Ministry says two Italian residents of Zimbabwe have been killed in unclear circumstanc The ministry on Tuesday confirmed the.
Zimbabwe faces its worst malnutrition crisis in 15 years, with tens of thousands of children requiring urgent treatment, UNICEF said Tuesday as the governmen.
HARARE, Zimbabwe (AP) — A photo mashup, posted on Facebook, shows 92-year-old Zimbabwean leader Robert Mugabe posing cozily with singer Rihanna and wearing h.
An Italian father and son who lived in Zimbabwe were shot dead by wildlife rangers while on an anti-poaching patrol in an apparent case of mistaken identity,.
Sibanda powers Zimbabwe to opening World T20 win
Opener Vusi Sibanda struck a fluent half-century to help Zimbabwe defeat a scandal-hit Hong Kong by 14 runs in the opening group encounter of the World T20 i.
Nov 11 (Infostrada Sports) - Scoreboard at close of play in the third and final One Day International between Bangladesh and Zimbabwe on Wednesday in Mirpur,.
Ireland end Zimbabwe series with win
Ireland battle to a consolation two-wicket victory in the final match of their one-day series in Zimbabwe
HARARE, Zimbabwe (AP) — A lion charged and killed a safari guide who was leading a group of tourists in the same national park in Zimbabwe that was the home .
VIDEO: Zimbabwe's 11-year-old motocross rider
Motocross is a form of off-road racing that has a small but loyal following across the African continent, 11-year-old Tanya Muzinda is gaining fans in Zimbabwe